Barlamaanka oo codka kalsoonida siiyey Xukuumada Ra’iisul Wasaare Saacid – idalenews.com
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaliya ayaa codka kalsoonida ah siiyay Xukuumadda cusub ee dalka Soomaaliya kadib kulan ka dhacay Xarunta Golaha shacabka oo Xukuumadda lagu horgeeyay. Kulankaasi ayaa waxaa dhamaan ku dhamaan musuuliyiinta dowlada sida Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo golihiisa wasiirada.
Raysal Wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa halkaasi isna ka hadlay waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in Baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyaan Xukuumadda cusub ee dalka Soomaaliya.
Tani waxay meesha ka saartey isqabqabsigii dowlada ka dhex jirey oo ku saleysanaa ansixinta xukuumada uu soo dhisey ra’iisul wasaare saacid oo ka kooban 10 wasiir.
Weeraro ka dhacay gobalka Rift Valley ayaa waxaa lagu dilay tiro ciidamada Booliiska Kenya halka kuwa kalena lagu dhaawacey.